Ahoana no hikarakarana ilay kitapo vaovao? 🥇 Torohevitra mahasoa
Ahoana no hikarakarana ilay kitapo vaovao?
Ahoana no hikarakarana ilay kitapo vaovao ?. Maro ny reny miahiahy momba ny kitapo fiterahana, aorian'izay, tsy maintsy ho feno tanteraka izy io mba hisorohana ireo olana amin'ny ho avy ao amin'ny efitrano fiterahana.
Ny fiomanana ny kitapo fiterahana dia miankina amin'ny fahatakaran'ny fahaterahana, aorian'ny reny rehetra dia tandindomin-doza ny fahazoana ny zaza ara-pahaterahana.
Na izany aza, Raha ny marina, vonona ny kitaponao manomboka amin'ny fiandohan'ny fahafito amin'ny volana fahavalo Mety ho toa tafahoatra io, fa aorian'ity vanim-potoana ity dia mety hateraka amin'ny fotoana rehetra ilay zaza.
Noho izany, manasaraka toro-hevitra vitsivitsy avy amin'ny lahatsoratra tsy afaka ny tsy hahita ny kitapo fiterahana ianao , ankoatry ny teknika momba ny fandaminana izay hanamora ny fiainanao sy ny tarika amin'ny fiterahana.
Ahoana no handaminana ny kitapo vaovao
Ny tsy azonao foanana ao anaty kitapo fiterahana ho an'ny zaza
Ny tsy azonao foanana any amin'ny kitapo maternage ho an'ny reny
Toerana hikarakara kitapo vaovao.
Ny fandaminana ny kitapo fiterahana dia antony lehibe, satria raha tsara kokoa ny mandamina azy dia mihamalalaka ny zavatra ilaina. Antony iray hafa tokony hodinihina hoe rahoviana handamina ny valizinao dia tsy ho ianao no hisafidy ny lamban-jaza na ny anao.
Ho ao anatin'ny fotoana fohy ianao, indrindra raha toa ka caesarean ianao, izay mandritra ny fotoana maharitra dia tsy ho tafavoaka amin'ny fandriana intsony ianao.
Amin'izany fomba izany, avelao hisaraka daholo ny zava-drehetra mba hahamora ny fiainana an'i Dada na ny mpiasa mpitaiza izay afaka mahita zavatra ao anaty valizy.
Torohevitra iray lehibe dia ny manasaraka ny zava-drehetra amin'ny kitapo voatondro , na diaper, akanjo an-jaza, vokatra momba ny fanadiovana manokana ho anao na amin'ny zanakao.
Koa amin'ny fotoana izay hikarohan'ny olona ny zavatra iray dia ho mora kokoa ny hahita, aorian'ny anarany rehetra.
Torohevitra iray hafa ny fanaovana ireo kitapo misy kitapo akanjo efa vita ho an'ny zazakely ity. , satroka feno, pataloha, socks ary overalls raha afaka manampy azy ianao. Miaraka amin'izany, rehefa azonao ilay kitapo miaraka amin'ireo akanjo ao anatiny, dia hanana ny zava-drehetra ianao mba hampiana ny zanakao.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny akanjon'akan'ny zazakely rehetra alohan'ny handehanana amin'ny kitapo dia tokony hosasana sy diovina tsara.
Na dia mandeha tsara amin'ny zava-drehetra aza ny zava-drehetra ary teraka ny zaza tsara tarehy, matanjaka ary salama ianao, dia tokony handany 24 ora farafahakeliny ao amin'ny hopitaly fiterahana ianao.
Amin'ity indray mitoraka ity dia afaka miovaova eo anelanelan'ny hopitaly bevohoka ianao, anjaranao ny mahita ny fanomanana ny kitaponao tanteraka araka izay azo atao.
Koa satria ny zaza dia handany farafahakeliny indray mandeha ao dia misy zavatra sasany tena ilaina ary tsy maintsy entinao.
Pataloha 6 miaraka amin'ny tongotra.
1 crème ho an'ny dermatitis ny diaper.
Ba kiraro 4.
Kiraro 3 roa.
6 tady am-bava.
1 fonosana diaper azo ampiasaina amin'ny RN.
Ny hopitaly sasantsasany no manome diaper amin'ny zaza sy menaka manitra an'ny zazakely Jereo hoe aiza no tianao hiterahana raha omena ireo fitaovana ireo alohan'ny hametrahana ny valizinao.
Ny safidy amin'ny akanjo dia miankina amin'ny vanim-potoana hahaterahan'ny zanakao, raha toa ka hatsiaka ny fanafahana, dia tsara kokoa ny fampidirana bodofotsy sy palitao bebe kokoa ao anaty valizy.
Ny reny koa dia tokony hieritreritra momba azy ireo rehefa mikarakara kitapo fiterahana, aorian'izany, raha eo ny zaza, dia ho akaiky azy ianao.
Raha misy fizarana cesarean dia tsy maintsy mandalo ihany koa ilay reny Ora 48 fandinihana mba hahazoana antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra.
Akanjo fandroana 1
3 bras hampinono
Clamp aorian'ny postpartum
3 pajama misokatra ho an'ny fampinonoana
Ba kiraro roa
Akanjo tsara mampahazo aina
1 fonosana feno alina
Paosy 1 fonosana aminy pecho
Tsarovy foana ny hamela ny antontan-taratasinao amin'ny olona efa misaraka sy efa vonona, aorian'izay, ny zazakely dia tsy misafidy ny fotoana fiterahana.
Trimester fahatelo bevohoka
28 herinandro bevohoka
Ahoana ny fikarakarana ny zaza vao teraka